Tandremo tsara ny hividianana milina fanapahana tamin'ny laser - China Jinan Geodetic Cnc Teknolojia
Ny rehetra izao fanapahana tamin'ny laser fampiasana milina no nitondra vy tsy hanahirana ny orinasa fanodinana. Raha mbola jambena ny be dia be ny fanapahana tamin'ny laser milina, dia afaka mihaino ireo hevitra ireo.
1. fanapahana kalitaon'ny tamin'ny laser fanapahana; tahaka ny sasany kitchenware, fiara, milina, fitaovana sy ny indostria, fametrahana mazava tsara ny fanapahana dia avo dia avo, tahaka ny santionany amin'ny fanapahana milina, na amin'ny endrika sy ny toetra, dia mahafa-po.
2. fanapahana haingana: ny safidy ny fanapahana tamin'ny laser mpanamboatra milina no tena hamonjy asa be dia be ny fotoana, dia hitondra fahombiazana ambony soa.
3. Rehefa avy-fanompoana varotra: raha mba misy tsara tamin'ny laser mpanamboatra milina fanapahana dia miankina amin'ny ny aorian'ny-varotra fanompoana, ny tany tsy misy farany tamin'ny laser fanompoana, mitsidika tsy tapaka mpanjifa